Weeraryahanka PSG Zlatan Ibrahimovic Oo Sheegay Inuu Jecel Yahay Inuu Dib Ugu Laabto AC Milan - jornalizem
Weeraryahanka PSG Zlatan Ibrahimovic Oo Sheegay Inuu Jecel Yahay Inuu Dib Ugu Laabto AC Milan
Weeraryahanka kooxda ka dhisan Faransiiska ee PSG Zlatan Ibrahimovic ayaa isagoo aan laga fileyn waxa uu sheegay in uu albaabada u furayo kooxdii hore uu uga tirsanaa ee AC Milan.
Weeraryahankan oo u wareegay PSG xaggaagii la soo dhaafay iyadoo ay ku bixisey kooxda uu u ciyaaro hadda wadar ahaan €70m isaga iyo Thiago Silva, balse waxa uu cadeeyey Ibrahimovic in uusan ku faraxsanayn ka tegitaankiisii Milan.
“Waxaan doonayaa inay Milan heerkii ugu wanaagsanaa gaarto. Halkaa aad ayaan ugu faraxsanaa waxana ay ii ahayd sidii gurigeyga oo kale,”ayuu Ibra ku sheegay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay isagoo jooga dalkiisa Sweden.
“Milan waa mid ka mid ah kooxaha aan jeclaan lahaa in aan ku laabto, haddii aan maantaba dooro la i yiraahdo. Badanaa dib uguma laaban jirin koox aan ka soot ago, balse waan jeclaan lahaa in aan ku laabto Milan waayo waa koox cajiib ah.
“Waxaan rajaynayaa in kooxda ay soo wanaagsanaato ayna dib ugu soo laabato guulaha ay gaari jirtey. Waxa kaliya oo aan u galo waa anigoo u rajeeya guul.
“Haddii Milan ay ii baahato waa ogtahay halka ay iga heli karto.”
Naadiga AC Milan ayaa waxa uu leeyahay hadda 7 dhibcood isagoo ku jira kaalinta 11aad horyaalka Seria Ada ee dalka Talyaaniga.